Nweta Peter Servold's Paleo na-eri akwụkwọ nri maka n'efu - Nkwụ ụgwọ ahụike
Mbido » Book » Nweta Peter Servold's Paleo na-eri akwụkwọ nri maka n'efu
Ruo obere oge, Peter Servold na-enye akwụkwọ ọhụrụ Paleo a na-akpọ Paleo Eats for FREE!
Ọ bụrụ n'ị na-achọkwa Ezi ntụziaka dessert Ezi ntụziaka, gbaa mbọ bulie otu akwụkwọ nri eji megharịa ọnụ Kelsey Ale bụ nke Paleo FREE http://www.paleosweetsbook.com
Onweghi ihe a gaghachigoro na onyinye Paleo a na-akwụghị ụgwọ. Ihe ịkwụsị ịkwụsị ịkwụ ụgwọ mgbe inwetara akwụkwọ a bụ ụgwọ mbufe otu oge. Akwụkwọ nri Paleo a bụ n'ezie 100% n'efu, ma ọ bụ ụzọ Pete iji kpughee akwụkwọ nri Paleo ya. Biko rịba ama na weebụsaịtị a nwere ike ịnata ụgwọ maka ịzụrụ ihe site na ịkọwa njikọ biko lee peeji nke amụma nzuzo anyị maka ozi ndị ọzọ ..